Prefen’ ny polisin’ Antananarivo : Hamafisina ny fandriam-pahalemana -
AccueilSongandinaPrefen’ ny polisin’ Antananarivo : Hamafisina ny fandriam-pahalemana
Prefen’ ny polisin’ Antananarivo : Hamafisina ny fandriam-pahalemana
Efa nandray fepetra ny prefen’ny polisy, mba tsy hisian’ny fifampihantsiana amin’ ny samy mpomba ireo kandidà, ka amin’ ireo toerana misy hetsika dia andefasana mpitandro filaminana avokoa. “Samy mafana fo mantsy ireo mpanara-dia ny kandidà roa, miatrika ny fifidianana fihodinana faharoa manohana ny kandidany, ary efa tsapa izany tamin’ny fifidianana fihodinana voalohany” hoy ny prefen’ny polisin’ Antananarivo, ny jeneraly Ravelonarivo Angelo. Eny amin’ ireny toerana misy hetsika ireny dia efa misy ny toromarika izay tokony harahin’ny rehetra, na mpomban’iza izy na iza. Antony tokony hampandrenesan’ireo kandidà roa andro mialoha, ny prefen’ny polisin’Antananarivo, ahafahana mandefa ireo mpitandro filaminana ireo.
Hiaraha-nahita tokoa ny fifanandrinan’ireo mpomba ny kandidà tany Antsirabe, na mbola fifidianana dingana voalohany aza no natrehina tamin’ izany. Noho izany dia tokony ho tony ny rehetra, ary tsy hifampihantsy satria samy malalaka amin’ ny fanehoan-keviny ny tsirairay ka tokony hapetraka hatrany ny fifanajana. Raha tsiahivina hatrany ny zava-nitranga tamin’ ny fifidianana fihodinana voalohany, nisy mihitsy mpomban-dRavalomanana Marc maty noho ny herisetra nataon’ny mpomba ny kandidà, izay mifanandrina aminy amin’ity fifidianana dingana faharoa ity. Efa samy niantso fitoniana avokoa ny tompon’andraikitra amin’ izao fotoana izao, satria tsy tombontsoa ho an’ ny firenena tokoa ny fifandonana amin’ ny samy malagasy. Noho izany tokony hampitsahatra ny fifandranitana ireo haino aman-jery, izay tsapa amin’ izao fotoana fa fototry ny tsy fifankahazoan’ny samy malagasy.